မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jun 12, 2012 in Copy/Paste | 46 comments
၀မ်းသာစရာ မင်္ဂလာသတင်းလေးမို့ အမြန်တင်ချင်တာနဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကိုအံတုရင်း ချက်ချင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ အခုပဲ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကလွှင့်သွားပါတယ်။ သမ္မတကြီးနဲ့ နုိုင်ငံစုံအဖွဲ့တွေ့ကြပါတယ်။ နော်ဝေကဦးဆောင် လာတာပါ။ နော်ဝေက ပွဲဦးထွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းပေးသွားပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကလဲလာသမ္မတကြီးကိုလာ လည် ဖို့ ဖိတ်သွားပါတယ်။ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကူညီမယ်လ်ို့လဲကတိပေးသွားပါတယ်။ အီးယူကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ထိကူညီမယ်လို့ကမ်းလှမ်းသွားသလို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလဲ ကြွေးမြီတွေရှင်းပြီးသွားရင် သက်သာသော အတိုးနှုန်းနဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ထိပေးမယ်လို့ ကတိပေးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးကမ္ဘာမှာမရှိသေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုနော်ဝေက ဦးဆောင်ဖွဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော် ဆောင်မှု့တွေမှာ လိုအပ်တဲ့အကြံညဏ်များပေးပြီး ပူးပေါင်းကူညီသွားဖို့သဘောတူသွားပါတယ်။ ဘရာဗိုပါသမ္မတကြီး။ သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။ သမ္မတကြီးနဲ့အမေစုကျန်းမာပါစေ။ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရအောင်ချီတုတ်လိုက်တာဖြစ်သလို သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့လဲထင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်းတွေကို ပြန်လည်သိခွင့်ရလို့ 
အမေရိကန်က ဝင်လာမယ့် စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကို အမြန်ဆုံးမြင်ချင်လှပါဘီ ။
အလှူငွေတွေရတာဝမ်းသာစရာပါ ။ အဲဒီလိုဝမ်းသာတဲ့အချိန်တိုင်း ရဲရင့်စွာကျဆုံးသွားတဲ့ ရခိုင်သူရဲကောင်းတွေကို သတိရပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့တမလွန်ဘ၀ကနေ ကျေနပ်ကြမှာပါ ။…….
မော်ကွန်းရေးထိုးသွားခဲ့ကြပြီ …. ။ ။
(ဧည့်သည်အသတ်ခံလိုက်ရသော အိမ်ရှင်များသို့ …. )
သွေးမော်ကွန်းထိုးခဲ့သူတွေ ရောက်ရာအရပ်မှ သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေဗျာ.
” ဧည့်သည်အသတ်ခံလိုက်ရသော အိမ်ရှင်များသို့ ”
စကားလုံးလေးက ခံစားရတယ်ဗျာ ။
ကဗျာလေးကို ဖေ့ဘွတ်မှာရှဲလိုက်ချင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ။ ရင်ထဲထိတဲ့ကဗျာလေးမို့ပါ။
ခုတော. အိပ်ကောင်းခြင်း အိပ်လို.ရပြီ
( ဘောပွဲကလည်း okဆိုတော.)
ဒီရက်ထဲမှာ ကြားရတာမို့ ပိုတောင် မင်္ဂလာရှိနေသလိုပဲ
ရိုဟင်ဂျာအရေး နဲ့ စိတ်မအေးရတဲ့ မြန်မာပြည်သူားတွေ အတွက်တော့ ရင်နွေးစရာ မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ။
အင်္ဂလန် အစိုးရ နှင့် EU က အစိုးရရဲ့ ၊
ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်း ကိုင်တွယ်ပုံကို ချီးကျူးသွားတယ် ။
သူတို့ မီဒီယာ အချို့ကလည်း သဘောထား စပြောင်းလာပြီ ။
အခု အကူအညီတွေလည်း စပေးလာပြီ ။
ကိုယ့်ဖက်က ပိုပြီး အခြေခိုင်လာပြီ ။
ဟိုတစ်နေ့က အယ်ကိုင်ဒါ အဆက်အသွယ်တွေ နှင့်
လက်နက်တွေကို မိတာ တော်တော် ကောင်းသွားတယ် ။
အမေစု ဆီက စကားတစ်ခွန်း Endorsement တစ်ခုပဲ
ဒီ မင်္ဂလာသတင်းလေး ဖတ်ရအပြီးမှာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားပါတယ်…
ကော်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားက ဒီလို share ပေးတဲ့ မသဲကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
အောင်မယ်လေးကော်နက်ရှင်ကတော့ ပြောမပြောချင်ပါဘူး။ ဒီစာလေးတင်တာ တနာရီလောက် ကြာတယ်။
၀မ်းသာစရာ တကယ့်မင်္ဂလာသတင်းပါပဲ …
သမ္မတကြီးရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုတွေကြောင့် ဘယ်သူမှန်လဲ ဘယ်သူမှားလဲဆိုတာ ပေါ်သွားတာပေါ့…။
သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုတို့ ကျန်းမာစွာနဲ့ နိုင်ငံအကျိုးကို ဆက်လက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ…
ကိုပေ၊ ဝေးလွင့်တိမ်၊ ရွာစားကျော်၊ ကိုဝင်း၊ လေးပေါက်၊ ကိုဆာမိ၊ အညာတမာ၊ အန်တီမမ၊ ကြည်ဆောင်း၊ အဘဖော၊ မွန်ကစ်၊ အမဝေ နဲ့ မွန်မွန်တို့ရေ
ကွန်မင့်လေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။ ဒီသတင်းလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်သူတိုင်း၊ မြန်မာပြည်ကိုတိုးတက်စေ လိုသူတိုင်း၊ မြန်မာ့အကျိုး ကို လိုလားသူတိုင်း ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ တကယ့် မင်္ဂလာ သတင်းလေးပါ။ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန်ဆိုပေမဲ့ အဲဒီမုန်တိုင်း ဟာကာလတခုပြီး ရင်တော့ ပျောက်ကွယ်သွားရမှာထုံးစံပါပဲ။ ကျွန်မတို့မျှော်လင့်တဲ့ခရီးမဝေးတော့ပါဘူး။
ကျနော် လဲ အဲ ဒီ သတင်း ကို ကြည့် ရ ပါတယ်။
ရခိုင် ပြည် နယ် အကြမ်း ဖက် မှု အဲ ဒီ လောက် အကြာ ကြီး ဖြစ်နေ တာ ကို ခံ စား ရင်း စိတ် မရှည် တာ တော့ အမှန်ပဲ။
ခု လို ရလဒ်ကောင်း တခု ရ ဖို့ စောင့် ရတာ လို ပဲ ဖြေသိမ့် လိုက် ပါတယ်။
စစ်အစိုးရတုန်းကတော့ အတင်းဝင်အတင်းတိုက်လို့ရပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရကတော့ အဲလိုလုပ် လို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ချစ်ကြည်ခါစမှာ အထီးကျန်ပြန်ဖြစ်သွားရင် ရလာမဲ့အကျိုးဆက်က ပိုရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကလဲ ဒီအချက်ကိုသတိထားမိလို့ အသားနုတက် ခါစ နိုင်ငံကို ပြသနာရှာတာပါ။ သီးမခံနိုင်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ရင် သူတို့အကွက်ထဲဝင်သွားမှာမို့ အချိန် ယူနေရတာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်းမရလို့မွေးထားရတဲ့ဒီပြသနာဟာ အစိုးရရဲ့လိမ်မာပါးနပ် မှု့ ပြည် သူတွေရဲ့စိတ်ရှည်သီးခံမှု့တွေကြားမှာ တခါတည်းအမြစ်ပြတ်သွားနိုင်တာမို့ စောင့်လက် စနဲ့စောင့်ပေး ရအောင်ပါ။ အခုကိုနိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံမဲ့တွေဆိုတာ သူတို့လက်ခံစပြုနေပြီမို့ ကျွန်မတို့မြေပေါ်ကနေ အပြီးတိုင်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ စောင့်လက်စနဲ့စောင့် လိုက်ကြပါစို့။
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂလီကို ဘယ်လို ခွဲခြားမှာလဲ
ဘင်္ဂလား က ပြန်အ၀င်မခံပါ၊သူတို့ဘာလိုချင်နေတယ်၊ဘာဖြစ်ချင်နေတာကို သူတို့အသိဆုံး။
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် .. ကလူဦးရေထူတပ် ၊စီးပွားရေးလဲမကောင်းပါဘူး
ရခိုင်ဒေသမှာ ရိုဟင်ဂျာ တဖြစ်တလဲ ဘင်္ဂလားကုလား တဖြစ်တလဲတွေ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအစွန်းရောက် အဖွဲ့တွေရဲ့ ငွေတွေနဲ့ လူလုပ်နေတာတွေ
ရခိုင်ပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂလားကုလားတွေကို
ကျွန်တော်လဲ မြန်မာတဦးပါ ၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါဘူး
အစိုးရက ဘယ်လိုလိမ္မာပြီး၊ ပြည်သူတွေက ဘာကိုသီးခံစိတ်မွေးရမှာလဲ
ဒါဆိုရင် ကချင်ဒေသကို မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ခရိယာန်ဘုန်းကြီးတွေလွတ်လိုက်ပါ
တိုင်းရင်းသားတွေကို သဘေားထားကြီးဖို့ တိုက်တွန်းဆော်သြလိုက်ပါ
ရခိုင်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာပါ
မွတ်ဆလင် ၁၀ဦးအသတ်ခံရတာ တောင်ကုတ်မှာ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာမောင်တောမှာ
ခုလှုသွားတဲ့နိုင်ငံတွေ ဒီဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံနိုင်ပါသလား
အော်စီက ၀န်ကြီးချုပ် ကပြောတာကတော့“ ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေ
ဘုရားသခင်မရှိတဲ့အရပ်မှာသွားနေပါတဲ့ ၊ဘာဖြစ်လို့လဲ ..သူမေးမှာမဟုတ်ပါဘူး”တဲ့
““အစိုးရရဲ့လိမ်မာပါးနပ် မှု့ ပြည် သူတွေရဲ့စိတ်ရှည်သီးခံမှု့တွေကြားမှာ တခါတည်းအမြစ်ပြတ်သွားနိုင်တာမို့ စောင့်လက် စနဲ့စောင့်ပေး ရအောင်ပါ။ ””
“အခုကိုနိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံမဲ့တွေဆိုတာ သူတို့လက်ခံစပြုနေပြီမို့ ကျွန်မတို့မြေပေါ်ကနေ အပြီးတိုင်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ စောင့်လက်စနဲ့စောင့် လိုက်ကြပါစို့။”
ဘယ်တော့လဲ… ဘယ်သူတွေက နိုင်ငံမဲ့သူတွေဆိုတာကို လက်ခံတာတုံး…
မသဲနုအေး ရေ…. နိုင်ငံတကာ က သူတို့ကို အာရုံနောက် နေလို့
ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပြည်ကို အလှုငွေ မဖြစ်စလောက်လေးပေးပြီး မကောင်းကျောင်းပိုဆိုရင်တော့ဗျာ…
သန်း ၂၀၀ သန်း ၃၀၀ ဆိုတဲ့ပမာဏကို မဖြစ်စလောက်လို့ သဘောထားရင် ကိုကိုအိုဗာက ဘယ်လောက်တောင်များလိုချင်နေလို့ပါလိမ့်။ အရင်က တပြားမှမရတဲ့ဘ၀ကနေ အခု သန်းပေါင်းရာချီရတာကို မရသေးဘူးလို့မှတ်ရင်တော့လဲ ကိုယ့်ရွေးချက်မှု့နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။
အစ်မသဲနုအေးရေ … ဒီသတင်းကြားရတာ … မင်္ဂလာရှိလိုက်တာ … ။
သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစုတို့ရဲ့ …. အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ … ရလာဒ်တစ်ခုပါပဲ … ။ ပီတိလည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
ဒီလိုပါပဲ .. အခုလို ရလာတဲ့ အကူညီတွေကို ..အလေလွင့်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ ၊ တကယ့်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ထည့်သုံးလျှင် သိပ်ကောင်းတာပါပဲ … ။ ပွဲလန့်တုန်း .. အတ္တရှေ့တန်းတင် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်ယူသွားမယ့်လူတွေရှိမှာလည်း စိတ်ပူမိတာပါပဲ … ။
ဟုတ်ပါ့တုန်တုန်ရေ။ ညကမှထူးထူးခြားခြားသတင်းနားထောင်ဖြစ်တာ။ အဲသတင်းလဲကြားရော စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုတာ ဆိုဖွယ်မရှိပါပဲ။ တာဝန်ရှိသူများမှလဲ ဒီငွေတွေကို ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေရာတွေ မှာအသုံးချလိမ့်မယ်လိုလဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး မထင်မှတ်လောက်အောင်နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားတာ အိပ်မက်ပမာပါပဲညီမလေး ရယ်။ ပျော်လိုက်တာ။
မင်္ဂလာရှိလိုက်တဲ့ သတင်းလေး ပါပဲ အစ်မရေ. အခုလို စိတ်ညစ်စရာတွေကြားမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းလေး ကြားရတော့ ရေခဲတုံး ကိုင်ထားသလို ခံစားရပါတယ်ဗျာ… အေးတော့အေးသွားတယ် ဒါပေမယ့် နဲနဲကျင်တယ်ပေါ့.. နော
တကယ့်မင်္ဂလာသတင်းပါ တိုက်တိုက်ရေ။ ကောင်းကျိုးရှိသလို ဆိုးကျိုးလဲမျှဝေခံစားရမှာ မို့ ကောင်းတာလေး အတွက် နဲနဲကျင်လဲ သည်းခံပေးပါ။
စကားမစပ် အခုတလော အုပ်အုပ်သတင်းပျောက်နေပါလား။ နေကောင်းရဲ့လား။
ဒီလိုသတင်းတွေကို အရင် နှစ် ၂၀ ထဲက ကြားချင်နေတာ အတော်ကြာပါပေါ့။ ခုတော့ ကြားခွင့်ကြုံရပြီပေါ့လေ… ဆက်လက် ပူးပေါင်းတိုးတက်အောင်မြင်ပါ့စေ….
မျှော်လင့်နေတဲ့နေ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတာပါပဲ။ စိတ်ရှည်သီးခံတဲ့အကျိုးတွေပေါ့။ ရှေ့ရှောက်တော့ရောင်နီပွင့်ပါပြီ။
အသိအမှတ်ပြု ကူညီပေးကြတဲ့ ဒီသတင်းလေးနဲ့ ပဲ စိတ်ဖြေရမှာပဲဂျီးဒေါ်ရေ
ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုဝမ်းသာစရာပါ။ နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုလာပြီဆိုတာကပိုဝမ်းသာစရာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် မသဲနုအေးရေ တကယ်ကို ဝမ်းသာစရာပါဘဲဗျာ။
မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေ
အင်းဒီဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကနေ အမြတ်ထုပ်နိုင်ရင်တော့ သားရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့ကိန်းဆိုက်တာပေါ့။
ဧည့် သည်အသတ်ခံရသောအိမ်ရှင်များသို့ ……..တဲ့ 
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံတကာကပါ လက်မခံနှိုင်အောင် ခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေ
မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပိုမိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ကိုယ့်မြေ၊ကိုယ့်ရေကို ကိုယ်သာပိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါစေ……..
Ko out of မှ
ကနေ့ ဒို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးအဏာ၊ကိုယ့်ရဲ့ စည်းစိမ် တည်မြဲရေး
အတွက်ပြဿနာကို မဖြစ် ဖြစ်အောင်လုပ်ကြံ ဖန်တီးကာယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မျိုး တွေ့နေရပါသည်…နောက်အပြစ်
မရှိတဲ့လူတွေကို တဖက်သတ် စွပ်စွဲ၊ လုပ်ကြံ၊ အနိုင်ကျင့် စသည်မတရားမှုတွေလည်း တွေ့မြင်နေရဆဲပါဘဲ…
ညနောက်တဖက်သူရဲ့ ပြန်လည်ခုခံ ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေဆိုတာလည်း အားနည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်…
မြန်မာပြည်မှာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ထူးမခြား အင်အားကြီးသူက အင်းအားနည်းသည့် လူတွေကို အနိုင်ကျင့်သော လုပ်ရပ်မျိုးလည်းဘဲ နေရာ တကာတွင်တွေ့နေရပါတယ်..
နောက်အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကို တဖက်သတ် စွပ်စွဲ၊ လုပ်ကြံ၊ အနိုင်ကျင့် စသည်မတရားမှုတွေလည်း တွေ့မြင်နေရဆဲပါဘဲ…
လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆန့်ကျင်တာဟာ အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အပြစ်မရှိဘူးလဲမပြောပါနဲ့။
တိရိစ္ဆာန်နဲ့ ထူးမခြား အင်အားကြီးသူက အင်းအားနည်းသည့် လူတွေကိုစတင်အနိုင်ကျင့်တာက အဲဒီက ခွေးသတောင်းစားရိုဟင်ဂျာတွေနော်။
ကော်မန့်တစ်ခုထဲမှာ (အဲဒီက အမျိုးတွေက ပြောရဆိုရတော်တော်ခက်တယ်၊
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ တော်တော်အားကိုးရတယ်)လို့ အစ်ကိုပြောခဲ့လို့ ၀င်ပြောရတာပါ။
အဲလို အမြင်စောင်းပြီး အပြုသဘောမဆောင်ဘဲ ကန့်လန့်တိုက်လိုက်နေတဲ့သူတွေလဲ တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကောင်းနေလို့မှမရတာ။ ရှိသင့်ပါတယ်။
အကူအညီတွေကိုလည်း ပြည်သူတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိသုံးပေးသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူတို့ကခေါင်းစဉ်တပ်ပေးသွားတာ အန်တီကြာရဲ့။ မြေမြှပ်မိုင်းအတွက် ဘာအတွက်ညာအတွက် ပေါ့။ အဲလိုပေးသွားတာ။ သန်း ပေါင်းကို ၇၀၀ လောက်ရတယ်။ ဒါတောင်မဖြစ်စလောက်လို့ပြောတဲ့သူကရှိသေး။
မသဲနုအေးပြောသလို ဆိုရင် အလှုငွေနဲံ
Myanmar express မှာသွားဖတ်ရှူ့စေချင်ပါတယ်
I phone 4S နဲ့သုံးရတာဆိုတော့စါရိုက်ရတာအဆင်
၀မ်းသာစရာသတင်းပါပဲ.. စောစောကပဲ အဲဒီ သတင်းလေး ကြားလိုက်ပါတယ်။ တစွန်းတစ ဖြစ်နေလို့ စိတ်ထဲတမျိုးလေး ဖြစ်ပြီး အတွေးက ဒွိဟ စိတ်တွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အခုမှ သေချာ သိတော့တယ်။
ဟုတ်ပါ့ဆူးရေ။ ၀မ်းသာတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ၀မ်းမသာတဲ့သူတွေလဲရှိတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ အခုတလောပျောက်နေတယ်။ အလုပ်ရှုပ်နေလို့လား။
အင်တာနက်ပျက်နေလို့ပါ။ အလုပ်ရှုပ်နေတာလည်း ပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ လိုင်းပျက်တာနဲ့ ရောပြီး သံယောဇဉ် ခဏ ဖြတ်ထားတာပါ။ အခုတော့ ကောင်းပြီ ဆိုတော့ နောက်ဆို ပုံမှန် တွေ့ရပါတော့မယ်။
Nice to hear this news.Wish to get peace forever Our President and Our Mother.
ကိုထူးဆန်း တင်ထားသော ပို့စ် မှ …
“ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်နေတတ်မှလည်း တဘက်ကနေပြီးတော့ မှန်မှန်ကန်ကန် တုံ့ပြန်မှာ။ အဲတော့ ကျွန်မကနေပြီးတော့ အမြဲသတိပေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်။ ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အိမ်ရှင်ကိုလေးစားရမယ်။ အိမ်ရှင်ရဲ့ အကြိုက်ကိုနားလည်ရမယ်။ ကိုယ်ကနားလည်မှုရှိရမယ်။ ကိုယ်က ဧည့်သည်ကိုး၊ ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှင်တွေကလည်း ကိုယ်ကနေပြီးတော့ နေတတ်လို့ရှိရင် ကိုယ့်အပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာမယ်။ ကိုယ့်အပေါ်အမြင်ပိုပြီးတော့ မှန်လာမယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မတို့ အဝေးရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများဟာ ကိုယ်ကဧည့်သည်ဖြစ်တယ်။ ဒီအိမ်ရှင်ပေါ်မှာ ကျေးဇူးတရားနဲ့ ဆက်ဆံစေချင်တယ်။ အဲဒီလိုဆက်ဆံခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့လူသားသိက္ခာကိုလည်း စောင့်စည်းရာရောက်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့သိက္ခာကိုလည်း စောင့်စည်းရာရောက်တယ်”
ဧည့်သည်များ အထူးသတိပြုကြပါကုန် ။ ။